rafozan-doza | Dago | 6
Refa natao ny fandinihana dia anisan'ny maha-"demokratika" sy hoe kritera mampadroso ny firenena iray ny fisian'ny fifamindra-pahefana milamina, mirindra ary tsy misy rihoriho/krizy. Tsy voatery hoe demokrasia ara-tandrefana akory io fa na hoe i sina aza, na ny hoe ireny firenena misy mpanjaka mbola mitondra ireny dia manaraka an'io fitsipika tsotsotra io. Mora mandroso kokoa ny firenena rehefa tsy misy gidragidra ny fifandimbiasana na fiovana eo @ fitondrana.
Ny tena mampiavaka ny firenena fopla otran'i Madagasikara (sy ny maro) @ hoe firenena hoe demokratika (ara-tandrefana) indray dia tena tsotra fotsiny hoe ny mpanao politika @ ireo dia marina fa tia fitondrana (pouvoir) fa ihany koa tia ny fireneny ary manao izany ho ambony mihoatra ny tenany. Izany hoe tsy be ambo-po ary tsy dia mivakl hoe tena fahaverezana sy tsisy honeur intsony enao ra tsy tafiditra @ fitondrana. Ny tena soatoavina lehibe eto dia ny hoe na toy inona ny fifamaliana sy ny fifandramotana aloha/mandritra ny fifidianana dia manaiky resy izay voatondro fa resy eny fa na dia hoe 0.0001% aza ny elanelana... tsy mijanona eo ny tolona fa mbola misy fifidianana hafa azo hatrehina ary indrindraindrindra hoe mbola hiverina iny fifidianana iny afaka 5 taona.
Dia mba lasa ny saiko hoe... manina ra mba atao kritera @ antsika ny toy izany?? Satria efa hita fa tsy ho hitranga araka ny bonne volontE an'ny mpanao politika malagasy ihany dia aleo asiana fitsipika handridra azy. Izany hoe tsy afaka milatsaka (ineligible) ho filoha izay tsy mampiseho fa afaka manaiky fa resy izy. Zavatra verifiable io fa tsy hoe otran'le miteny hoe "tia tanindrazana" sy hoe "tombon-tsoam-bahoaka" ihany an... sao dia lasa kobaka ambava fotsiny... Ohatrohatra:
* Tsy mahazo mirotsaka izay mbola tsy nirotsaka t@ in na t@ in... izany hoe mirotsaha ho filoham-pokotany aloha vao mahazo mirotsaka ho filoham-pirenena.
* Izay efa nirotsaka ka mbola tsy nanaiky hoe resy t@ izay firotsahana nataony dia tsy mahazo mirotsaka ihany koa. Izany hoe olona efa nirotsaka ho fidiana ary efa resy fara faha-keliny in-1 no mahazo mirotsaka.
* Mila hoe fanekena ampilaminana ary tsy nisy rihoriho vao azo ekena... zany hoe ra nisy krizy t@ fifamin-drapahefana na nisy hoe fitokonana na otran'zany dia tsy poinsa.
* Mila hoe olona madiodio ara-pitondratena. Izany hoe olona tsy mbola nisy scandale (na marina na diso)... surtout hoe voarohirohy na voaheloka na efa hoe nomena amnistie...
Karazana certificate of good conduct kely zany ee...
Dia ra ireo no ampiharina dia... iza sisa no mahazo mirotsaka???
na i Maihol aza tsy poinsa... ra tsy hoe mikaonty ny hoe filoham-piangonana
Tsy manakivy ah!!
11/25,2012 Sokajy Dago
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 57 58 59 Manaraka»